Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaha dowladdaha Jibouti & Somalia oo meel xun gaadhay Iyo Safiir laga tarxiilay dalka…. | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaha dowladdaha Jibouti & Somalia oo meel xun gaadhay Iyo Safiir laga tarxiilay dalka…. – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home W.Gudaha Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaha dowladdaha Jibouti & Somalia oo meel xun gaadhay Iyo Safiir laga tarxiilay dalka….
Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaha dowladdaha Jibouti & Somalia oo meel xun gaadhay Iyo Safiir laga tarxiilay dalka….
Aug 8th, 2018 · 6 Comments
HARGEYSA(P-TIMES)-Dawladda Jibouti oo cadho weyn ka qabta hab dhqanka madaxweyne Farmaajo iyadoo dowladda Jamhuriyada Jabuuti ay muddo dheer colaad ka dhex taagnayd ayuu madaxwaynha Somalia Maxamed Cabdilahi Farmaajo safar ugu amba baxay magalada Asmra ee dalka Eritrea kadib waxa ay kulmeen madaxwaynha Eritrea.
Maxmed Cabdilahi Farmaajo ayaa markuu kulanku soo dhamaaday ee ay heshiisyo kala saxeexdeen dowladda Somalia iyo Eritrea ayaa waxa hadaladii Maxamed Cabdilahi Farmaajo madaxweynha Somalia kamid ahaa “Waxa aan beesha caalamka ka codsanayaa in cuna qabataynta hubka laga qaado dawladda Eritrea”.
Hadalkaas lama filaan ayey ku noqotay Farmaajo dhamaan dad waynha reer Jabuutina waxa ay u hayaan cadaawad aan ilawshiyo lahay oo aan dhamaad lahay Farmaajo.
Madaxwaynha Jamhuriyada Jibouti Ismaaciil Cumar Gelle ayaa waxa uu hadalka Farmaajo ku saleeyay in uu duulaan cad ku yahay dawladda Jibouti dagaal toos ahna nagu soo qaaday, waxaana laga caydhiyay shaqadii safiirkii Somalia u fadhiyey Jibouti.
August 8, 2018 at 9:57 pm / Reply
siyasada farmaajo ee khaldan waxay ufaidaysa Somaliland waxaan ogayn tii Emaradka carabta waxan aragna tan jabuuti guuuuuuuuuuuuuul somaliland
August 8, 2018 at 10:39 pm / Reply
Jabuuti waa cadawga kowaad ee Somalia, waxay ka macaashaan dhibka Soomaalya.
NINKII WARAABE RABAYSTA RIYUHUU KA CUNAAYE,, RAFIIQEEYGII MA ISKU KEEY ROGAY..IMISAANU LAHAYN ISMAIL CUMAR GEELE WAAR NIMANKAAS KOONFUREED ISMA TAQAANAAN E KA JOOG..IMISAANU LAHAYN WAAR ANAKAA EHEL AH EE NA TAGEER OO KOONFUR SANGADHUUDHI AH HA NAGA RAACIN…IMISAANU LAHAYN WAAR NIMANKAAS ANAKAA KAA NAQAANA OO WAXTARKA DOQONIMAY U YAQAANAANE SOMALILAND TAAGEER.
WAA TAAS EE KA GURO…MAXAANU KU SHEEGAYNEEEEY
February 8, 2019 at 11:44 am / Reply
February 8, 2019 at 1:05 pm / Reply
February 9, 2019 at 8:53 am / Reply